Akpa Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner ka akpọrọ Berlin
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Akpa Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner ka akpọrọ Berlin
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • investments • News • ndị mmadụ • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Akpa Lufthansa Boeing 787-9 Dreamliner ka akpọrọ Berlin.
Lufthansa na isi obodo German nwere mmekọrịta ogologo na pụrụ iche. E hiwere ụlọ ọrụ prewar na Berlin na 1926 wee bilie ọzọ ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na -anya ụgbọ elu ụwa. Mgbe njedebe nke Agha IIwa nke Abụọ na afọ 45, ọ bụ naanị ụgbọ elu nkịtị nke 'ndị jikọrọ aka' ka enyere ohere ịbanye n'obodo ahụ kewara ekewa.
Ememe ịkpọ aha gọọmentị na ụgbọ elu mbụ nke Boft 787-9 mbụ nke Lufthansa ga-eme n'afọ ọzọ.
Lufthansa kwupụtara na ọ ga -enweta ngụkọta ụgbọ elu Boeing 787 Dreamliners na 2022.
Mmanụ oriri na ikuku anwuru ọkụ CO2 nke ụgbọ elu na-ebu ogologo dị ihe dịka pasent 30 dị ala karịa ndị bu ya ụzọ.
Isi obodo German ga -anata onye nnọchi anya “na -efe efe” ọhụrụ: Lufthansa na-akpọ Boeing 787-9 mbụ ya "Berlin." A ga -eme emume ịhọpụta aha ahụ ka ebusịrị ụgbọelu ahụ n'afọ na -abịa.
"Berlin”Bụ nke mbụ n'ime ụgbọ elu Boeing 787-9 Dreamliners nke Lufthansa ga-atụkwasị n'ụgbọ mmiri ya na 2022. Ụgbọ elu ogologo oge a na-eri ihe dị ka naanị lita 2.5 nke kerosene n'otu onye njem na kilomita 100 na-efe. Nke ahụ bụ ihe dịka pasentị iri atọ erughị ụgbọ elu bu ụzọ. A na -akwalitekwa anwuru ọkụ CO30 nke ukwuu.
Ebe ọ bụ na 1960, Lufthansa enweela omenala ịkpọ ụgbọ elu ya aha obodo German. Willy Brandt, onye isi ọchịchị West Germany na ngwụsị afọ 1960 na 70, sọpụrụ Lufthansa n'oge ọ bụ onye isi obodo West Berlin (1957 - 1966) site n'ịkpọ Boeing 707 mbụ ụgbọ elu ahụ.Berlin".
N’oge na-adịbeghị anya, Airbus A380 nke nwere akara ndebanye aha D-AIMI bu aha a ma ama nke isi obodo Germany. Lufthansa Boeing mbụ 787-9-“Berlin”-ga-edebanye aha D-ABPA. Ebe izizi ga-aga ebe etiti mba ụwa maka Lufthansa nke 787-9 ga-abụ Toronto, ụlọ ọrụ ego Canada na etiti ya.
Lufthansa na isi obodo Germany nwere mmekọrịta ogologo na pụrụ iche. E hiwere ụlọ ọrụ prewar na Berlin na 1926 wee bilie ọzọ bụrụ otu n'ime ndị na -anya ụgbọ elu ụwa. Mgbe njedebe nke Agha IIwa nke Abụọ na afọ 45, ọ bụ naanị ụgbọ elu nkịtị nke 'ndị jikọrọ aka' ka enyere ohere ịbanye n'obodo ahụ kewara ekewa.
Kemgbe njikọta, Lufthansa na -efega Berlin ihe karịrị afọ 30, na -enweghị otu ụgbọ elu na -efe ọtụtụ Berliners n'ụwa niile n'ime iri afọ gara aga dị ka Lufthansa na ndị na -ebu nwanne ya. Ka ọ dị ugbu a, ụgbọ elu Lufthansa Group na -ejikọ isi obodo German na ihe ruru ebe 260 n'ụwa niile, ma ọ bụ jiri ụgbọ elu na -aga ma ọ bụ site na njikọ n'otu n'ime ọtụtụ ogige.